Kuparidzira vaSinti nevaRoma muGermany
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Batak (Toba) Catalan Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Finnish Fon French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hungarian Indonesian Italian Japanese Javanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Polish Portuguese Rarotongan Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tahitian Tatar Telugu Thai Tigrinya Turkish Ukrainian Valencian Vietnamese Xhosa Yoruba
MuGermany mune vaSinti nevaRoma vakawanda chaizvo. * Munguva ichangopfuura, Zvapupu zvaJehovha zvakabudisa mabhuku nemavhidhiyo anotsanangura Bhaibheri mumutauro wavo wechiRomany. *
Muna September naOctober 2016 Zvapupu zvaJehovha zvakaita mushandirapamwe wekubatsira vaSinti nevaRoma. Vakaenda mumaguta ekuGermany anosanganisira Berlin, Bremerhaven, Freiburg, Hamburg, neHeidelberg ndokupa vanhu vacho mabhuku mumutauro wechiRomany. Vakarongawo kuti hurukuro dzavose dzipiwe mumutauro wechiRomany padzimba dzavo dzeUmambo.
Hakusi Kufara Kwakaita Vanhu Ivavo
VaSinti nevaRoma vakawanda vakashamiswa uye vakafara chaizvo nemushandirapamwe uyu wakaitwa neZvapupu. “Vakafara chaizvo nekuti takaita zvese zvataigona kuti tivaparidzire,” anodaro Andre nemudzimai wake Esther, avo vakashandawo pamushandirapamwe uyu. Vakawanda vakafara zvekufara zviya pavakanzwa Shoko raMwari mumutauro wavo. Mumwe musikana akaona vhidhiyo inonzi Nei Uchifanira Kudzidza Bhaibheri? mumutauro wechiRomany. Ashamiswa nazvo akaramba achingoti, “Uyu ndomutauro wangu!”
Mumwe weZvapupu zvaJehovha anonzi Matthias, uyo akashandawo pamushandirapamwe muguta reHamburg akati: “Ini nemudzimai wangu taiva muboka revanhu 8 vaishanyira nharaunda inogara vaSinti nevaRoma vanenge 400. Munhu wese wataitaura naye aikumbira mabhuku edu.” Bettina, uyo aivawo muboka revakaenda kuHamburg anotiwo: “Vamwe vatakasangana navo vakachema pavakaona kuti Zvapupu zvaJehovha zvakabudisa mabhuku mumutauro wechiRomany.” Vakawanda vakabva vatotanga kuverenga zvinonzwika mabhuku atakanga tavapa, uye vamwe vakatokumbira ekuti vazopawo shamwari dzavo.
Pane vaSinti nevaRoma vakati kuti vakabvuma kuuya kumisangano kuti vazonzwa hurukuro dzavose. Pamusangano wakaitwa muHamburg, pane vanhu 94 vakauya, uye vakawanda vavo vakanga vasati vambopinda muImba yeUmambo. Muguta reReilingen, riri pedyo nereHeidelberg, kune vanhu 123 vakapinda musangano. Musangano wacho wapera, vanhu 5 vaitaura chiRomany vakakumbira kuti vazodzidziswa Bhaibheri.
Pamushandirapamwe uyu, Zvapupu zvaJehovha zvakapa vanhu mabhuku nematract anoda kusvika 3 000. Zvapupu zvaJehovha zvakakurukura nevaSinti nevaRoma vanopfuura 360, uye 19 vakatanga kudzidziswa Bhaibheri. Vamwe vavo vakati, “Zvinofadza kuona kuti Mwari afungawo nezvedu.”
^ ndima 2 VaSinti rudzi rwune vanhu vashoma vanogara kuWestern neCentral Europe, uye vaRoma rudzi rwune vanhu vashoma vakabva kuEastern nekuSoutheastern Europe.
^ ndima 2 Encyclopædia Britannica Online rinoti “mitauro yevaRoma ine mapazi 60 kana kupfuura.” Kuti zviite nyore kunzwisisa nyaya ino, tichashandisa shoko rekuti Romany tichireva mutauro unotaurwa nevaSinti nevaRoma vanogara muGermany.